Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI Oo Kulan La Yeeshay Dhalinyarada Xisbigaas | Salaan Media
Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI Oo Kulan La Yeeshay Dhalinyarada Xisbigaas
Hargeysa (SM) – Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo xubno ka tirsan madaxda heer qaran ee Xisbiga ayaa kulan kala qaybgalay dhalinyarada xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI kulankaas oo ka qabsoomay xarunta gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa.
Kulankan dhexmaray dhalinyarada xisbiga WADDANI iyo gudoomiye Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa lagu falanqeeyey doorka siyaasadeed ee dhalinyaradu ka ciyaarikarto xisbgia WADDANI iyo sidii loo hirgalin lahaa dhisme waafi ah oo dhalinyaradu yeeshaan.
Afhayeenka Xisbiga WADDANI Md. Ibraahin Mahdi Buubaa oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada usoo jeediyey inay dhalinyaradu la yimaadaan curin isla markaasna ay hirgalinkaaraan ujeedooyinkooda, waxaanu kula dardaarmay in dhalinyarada xisbiga WADDANI looga baahanyahay isku filnaansho dhinac walba leh.
Xoghayaha Warfaafinta Xisbiga WADDANI Md. Maxamed Xasan Dirir ayaa ka warramay hanka sare ee dhalinyarada xisbiga WADDANI ku jirta isaga oo xusay in loo baahanyahay in garabka dhalinyarada xisbigu noqdo Acadamy ama goob aqooneed lagu tababaro siyaasiyiinta barri si mustaqbal loo helo siyaasiyiin da yar oo khibrad leh.
Hanti dhawraha Guud ee Xisbiga WADDANI Xasan Xuseen Codyare ayaa tilmaamay doorkii dhalinyaradu kasoo ciyaartay guushii xisbigu ka gaadhay doorashooyinkii golaha deegaanka ee ina dhaafay isaga oo xusay in dhalinyaradu leedahay awood badan oo haddii laga shaqaysiiyo guul keeni karta mustaqbalka dhaw.
Gudoomiyaha Gobolka Maroodijeex Md.Shiine Muxumed Idiris ayaa ka warramay waxqabadka dhalinyarada xisbiga isaga oo xusay inay sameeyeen dhalinyaradu xeerkii waafi ah oo ay isku maamulaan dhalinyaradu isaga oo tilaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada laga taageero sidii ay u samaynlahaayeen nidaam ku dayasho mudan.
Waxa sidoo kale warbixino iyo afkaar badan kasoo jeediyey dhalinyarada xisbiga WADDANI iyaga oo ka warramay halka ay wax u marayaan iyo hamigooda mustaqbalka iyaga oo xusay inay awood u leeyihiin inay hirgaliyaan nidaam aqoon ku dhisan.
Ugu dambayntii Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo soo gunaanaday kulankaas ayaa tilmaamay in dhalinyaradu madaxbanaani buuxda u haystaan hirgalinta ajandeyaashooda mustaqbalka dhaw iyo fogba isaga oo carrabka ku adkeeyey in dhalinyaradu awoodaan dhisme ku dayasho leh.
Gudoomiyuhu wuxu balan qaaday inay dhalinyarada ku garabgalidoonaan xaqiijinta hamigooda isaga oo tilmaamay in dhalinyaradu samaysatay xeer isla markaasna ay qabsandoonaan shirweyne ay kasoo qaybgalaan dhamaan gobolada iyo dagmooyinka dalka Somaliland.